Mpaghara nlere ọla edo sitere na Pierre Loti Hill Na-asọpụrụ Onye ọ bụla | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulNleba anya na Golden Horn si Pierre Loti Hill Fascinate Onye ọ bụla
13 / 05 / 2020 34 Istanbul, General, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey, TELPHER
Ele nke Halic si Pierre Hill bụ ihe a na-ewu ewu maka mmadụ niile
Mgbe ị ruru rute ugwu ndị a, nke bụ mpaghara kachasị mma ebe ị nwere ike ikiri panorama ahụ a ma ama nke Golden Horn; Kọfị, nke a na-akpọ onye ama ama ama ama ama ama France bụ Pierre Loti, ruru. Ezigbo aha Pierre Loti, onye biri na Istanbul ogologo oge ma bụrụ ezigbo onye hụrụ Istanbul n'anya, bụ “Julien Viaud”. Kọfị akụkọ ihe mere eme bụ ebe kachasị mma ebe enwere ike ịhụ ihe pụrụ iche. Ọ ga-ekwe omume iji ụgbọ ala rịgoro n’elu ugwu ahụ.
banyere pier loti ugwu
A na-ekwu na Pierre Loti, bụ onye hụrụ ya dị ka ala nke abụọ, bịara kọfị a a maara dị ka 'Kọfị nke Women'smụ nwanyị Rabia' ma dee akwụkwọ akụkọ "Aziyade" megide Golden Horn. Mpaghara, ebe akpọghachiri “agbata obi” mbụ ma na-adị ndụ taa, mejupụtara ebe ndị a na-arụ ọrụ dị ka ebe ndị njem. A na-akpọ mpaghara ahụ akwụkwọ Akwụkwọ Evliya Çelebi dị ka "Mmepe Nkwalite Idris".
Pierre Loti, nke bụụrụ ndị mba ọzọ niile na ndị njem na-abịa Istanbul na narị afọ nke 19, nwere ọtụtụ ụlọ akụkọ ihe mere eme gburugburu ya. Otu n’ime ha bụ Kaşgari Tekkesi e ji osisi rụọ nke dere ihe abụọ e dere na 1813. Ọzọ, n'ọnụ ụzọ ụlọ ọrụ ahụ, ụlọ ahụ nke nwere okwute gburugburu agba ọcha ka edere na Persian bụ Çolak Hasan Tekkesi. Thelọ akụkọ ihe mere eme dị na eriri Tekke bụ Schoollọ Akwụkwọ Ọgwụ. Ili nke Mevlevi aha ya bụ "İskender Dede", onye nwụrụ n'afọ 1589, dị n'ihu Mekteb na n'ime mpaghara ihe owuwu ahụ, nke İdris-i Bitlisi, onye bụkwa onye edemede Ottoman dere. Otu n'ime olulu mmiri atọ dị n'ihu İskender Dede bụ Dilek ama ama ama (ma ọ bụ ebumnuche) Ọfụma. Na Evliya Çelebi Seyahatname banyere olulu mmiri a; O dere na "ndị na-ele anya ọma na-ahụ ihe ha chọrọ na olulu mmiri ha". N'elu elu nke ili ahụ bụ ili Saray “Atçıbaşı (Mirahur-Tuğ General) Ali Ağa na ezinụlọ ya. Na mgbakwunye, "Sarnıç", nke a kwenyere na ọ wuru na oge Byzantium ma jiri ya mee ihe n'oge Ottoman, na-ekwusi ọnụnọ ya na etiti ogige ahụ.
Uzo esi aga na họtelu Pierre Loti Hill?
Ọ bụrụ n’ị ga-eji ụgbọ ala gị aga; Azọ gara azụ na Pierre Loti. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike ịrịgo n'ugwu ma hapụ ụgbọ ala gị ebe ahụ, na-ahapụ ebe a na-adọba ụgbọala…
Ndị na-ejighi ụgbọ ala si n'akụkụ Anatolia nwere ike ịbanye na Üsküdar - ferry Eyüp. Nwere ike ịrị ugwu ahụ site na iburu ụgbọ ala ọdụ ụgbọ mmiri site na ọdụ ụgbọ mmiri.
Ọ bụrụ na ị na-eji bọs abịa, ị kwesịrị ịpụ na nkwụsị Eyüp Sultan ka ị garuo Pierre Loti wee si ebe ahụ jiri ụgbọala USB.
You nwere ike iji ụgbọ ala gaa USB na Pierre Loti Hill ...
Cargbọ ụgbọ ala Pierre Loti
By jiri ụgbọ ala iji gaa Pierre Loti Hill, ị ga-eji ụgbọ ala USB nke obodo Metropolitan Obodo. Maka nke a, ị nwere ike ịgafe site n'ịgụ 'Istanbul Card' gị dịka mbipụta nkịtị. Maka mbipụta ọ bụla, ndị nwere kaadị mgbe niile na-akwụ 2,60. Ọ bụ ezie na ndị nkuzi na-akwụ ụgwọ 1,85, ọnụahịa tiketi ụmụ akwụkwọ bụ 1,25.
Pierre Loti Cable Car Images na Pụrụ Iche
Olympos Teleferik na-eme ka ndị ọbịa ya nwee mmasị na ya (Video)
Pierre Loti na Cable Car (Photo Gallery - Video)
A na-ewu ụlọ Eyup-Pierre Loti-Miniatürk
Eyüp - Pierre Loti - Miniatürk Ropeway System Project Pre-zaɓi…
Usoro iwu malitere na Eyup-Pierre Loti-Miniaturk cable line
Ụgbọala Cable n'etiti Eyup na Pierre Loti ga - agbatị Miniaturk
Pierre Loti-Miniaturk USB ụgbọ ala mmepe atụmatụ atụmatụ
Nkwupụta Obi Ụtọ: Eyüp-Pierre Loti-Miniatürk Cable Car System ga-ewu
Ọnye na-bụ Pierre Loti?
Istanbul, Halic Metro Pass Bridge n'ihi Ndekọ Ụwa
Ekrem İmamoğlu: 'A ga-ata ata mmiri nke Golden Horn, Mmiri ga-agba site na isi iyi nke 3 nke Ahmet'
Ihe mere eme Varda Bridge Visible
Iamụ nwanyị kọfị Rabia
Nduzi Coronary Virus Ederede nke Sector bipụtara
Bursa View si na ụgbọ ala ụgbọ elu
3. akwa na-ekiri ndị na-ekiri ya na echiche pụrụ iche (Video)
Ụzọ ọhụrụ ọhụrụ
Railway Artists Ndi Enchanted
Denizli Teleferik na Snow View ọzọ mara mma